डेब्यु फिल्मबाट रातारात हिट ‘प्रेम गीत’ की अनिता अहिले छिन् गुमनाम – Nepal's No. 1 Digital Newspaper, Business News, Tourism News, Sports News, Entertainment News, Tourism Year 2020, digitalkhabar.com …express media network
Home / मनोरन्जन / बलिउड / डेब्यु फिल्मबाट रातारात हिट ‘प्रेम गीत’ की अनिता अहिले छिन् गुमनाम
डेब्यु फिल्मबाट रातारात हिट ‘प्रेम गीत’ की अनिता अहिले छिन् गुमनाम
By Digital Khabar on २९ श्रावण २०७६, बुधबार ०५:१४
मुम्बई– बलिउडमा कयौं यस्ता कलाकार छन् । जो एक समय सफलताको शिखरमा थिए । तर अहिले गुमनाम छन् । ती मध्येकी एक अनिता राज पनि हुन् ।
अनिता राज ८० को दशकमा निकै चर्चित थिइन् । सफलता पनि राम्रै मिलेको थियो । तर अहिले भने उनी फिल्म क्षेत्र र चर्चा भन्दा बाहिर छिन् । १३ अगस्ट १९६२ मा मुम्बईमा जन्मिएकी निता अभिनेता जगदीश राजकी छोरी हुन् । उनले १९८२ मा फिल्म ‘प्रेम गीत’ बाट अभिनयमा डेब्यु गरेको थिइन् । फिल्मको सफलताले उनी रातारात स्टार बनिन् ।
करिब १० बर्ष उनले फिल्म उद्योगमा सफलताको सिँढी चढिरहिन् । १९९२ मा उनले सुनिल हिंगोरानीसँग विवाह गरेर छोराको जन्मदिइन् । त्यसपछि उनी फिल्म अभिनयभन्दा बाहिर रहिन् । त्यसपछि २०१२ मा उनी एकपटक फेरि चर्चामा छाएकी थिइन् । यो समय उनी फिल्मभन्दा पनि श्रीमानको कारण चर्चामा छाएकी थिइन् । उनको श्रीमान्माथि महिलाहिंसाको आरोप लागेको थियो ।
अनिताले बलिउड छोड्दा उनका फ्यान निरास बनेका थिए । सोही कारण उनलाई सोधिएको थियो ‘कहिले बलिउड कबब्याक गर्ने ?’ राम्रो रोल मिले फेरि अभिनयमा आउनेछु उनको जवाफ हुन्थ्यो । अनिताले फिल्ममात्र होइन कयो टिभी सिरियलमा पनि काम गरेकी छन् । आशिकी, इना मिना डीका, २४ जस्ता टिभी शो पनि उनको अभिनय कारणले चर्चामा थियो ।
← Previous Story ‘हजार जुनीसम्म’ ले फर्काउला त आर्यनको क्रेज ?
Next Story → १५ वर्षपछि बाध्यताले बलिउड फर्किएकी श्रीदेवीका जीन्दगीका खास कुराहरु